Sida loo xannibo xayeysiisyada Microsoft Edge ee iPhone iyo iPad | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo xannibo xayeysiisyada Microsoft Edge ee iPhone iyo iPad
Sida loo xannibo xayeysiisyada Microsoft Edge ee iPhone iyo iPad
Microsoft Edge waxay leedahay faa'iidooyin fiican marka loo eego Safari ee iPhone iyo iPad - gaar ahaan haddii aad caadi ahaan u isticmaasho Windows miiskaaga. Laakin sida daalacashada kale ee qolo saddexaad, si wacan uguma ciyaari karto waxyaabaha xannibaya.
Si kastaba ha noqotee, Edge wuxuu leeyahay xannibaadaha ku dhex jira iOS iyo iPadOS. Hagahanna, waxaanu ku tusi doonaa sida aad awood ugu yeelan karto.
Qaar ka mid ah sababaha aad u dooran karto inaad u isticmaasho Edge ka badan Safari waa awooda ay kula jaanqaadi karto Edge ee Windows (iyo Mac), muuqaal iyo cod, is dhexgalka Abaalmarinta Microsoft, iyo agabkeeda wax iibsiga ee internetka ee waxtarka leh.
IOS iyo iPadOS 14, waxaad xitaa u dejin kartaa Edge inuu yahay biraawsarkaaga caadiga ah, markaa looma baahna inaad isticmaasho Safari mar dambe haddii aadan rabin. Waayo-aragnimada biraawsarka fudud, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale rabto inaad xannibto xayeysiisyada.
Halkan waa sida.
Sida loo sahlo xannibaadaha ku dhex-jira Microsoft Edge
Open Microsoft Edge on iPhone ama iPad.
Taabo saddexda dhibcood ee hoose ee shaashadda.
Dooro Content blockers ka dibna taabo beddelka ku xiga Jooji xayeysiiska si ay u awoodaan.
Taabo Dhammaad Badhanka.
U ogolow plugin Adblock Plus inuu dilo dhammaan xayeysiisyada.
Waa inaad aragto xayaysiisyada isla markaaba baaba'aya haddii aad horeba u eegtay shabakad. Haddaysan ahayn, si fudud taabo badhanka dib u soo kicinta oo boggu wuxuu dib u soo dejin doonaa xayeysiis la'aan. Waxa kale oo laga yaabaa inay waxoogaa ka sii fududaato oo ay ka sii daato.
Edge ma aha browserka kaliya ee qolo saddexaad ee iPhone iyo iPad ee leh xannibaadaha xayeysiiska ah ee ku dhex jira. Laakiin Google Chrome ma sameeyo. Iyo in la arko in Edge uu la mid yahay Chrome ka hoostiisa, waa beddel weyn.
Ma u baahan tahay Hogaamiyaal badan oo xisbiga koowaad ah? Kori Liiska Iimaylkaaga
Sida loo geliyo AirTag maqan qaabka Lost Mode